Noho ny ady ataon’i Tonizia amin’ny Covid19, voatohintohina ny fahalalahana maneho hevitra · Global Voices teny Malagasy
’Tsy vita vaksiny hiatrika kiana ireo andrimpanjakana sy ireo manampahefana’
Voadika ny 20 Mey 2020 9:50 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Ελληνικά, বাংলা, عربي, polski, Español, Français, русский, English
Raha ny mahazatra dia olona no mameno eto, fa ireo voromailala izao no mibodo ny kianja Bab Bhar ao Tunis renivohitra, satria efa hatramin'ny 22 Martsa ny firenena no niaina fihibohana. Sary : Lost in Tunis blog [nahazoana alàlana].
Amin'ny ady iatrehan'i Tonizia ny COVID-19, miatrika fanampenambava izay rehetra manakiana ny fomba fiatrehan'ny governemanta an'ilay valanaretina.
Tany am-piandohan'ny volana Aprily, roa ireo bilaogera nosamborina satria niampanga ireo manampahefana any an-toerana ho yanao kolikoly mifandraika amin'ny fitsinjaràna ireo fanampiana, raha iray kosa mpanao gazety miatrika ompa sy fanivaivàna ety anaty tambajotra satria nanakiana ny minisitry ny fahasalamàna.
Ny 14 Aprily 2020 i Anis Mabrouki, bilaogera no sady mpikatroka, no voasambotra, andro iray taorian'ny nandefasana mivantana lahatsary tety anaty Facebook izay nahitàna andiana olompirenena tao Tebourba (30 km any andrefan'i Tunis renivohitra), nivangongo teo anoloan'ny biraon'ny ben'ny tanàna hitaky ny fanampiana ara-bola nampanantenain'ny governemanta ho azy ireo.
‘’Omena olona sasany sy tsinjaraina amin'ny fomba mampiahiahy ny fanampiana,’’ hoy i Mabrouki naneho hevitra fony nandefa ilay lahatsary nivantana.
Taorian'izay dia nametraka fitoriana azy ny ben'ny tanàna, ary ny 15 Aprily izy no niatrika fitsaràna ka vesatra anenjehana azy ny “nanaingà tabataba sy korontana teny anivon'ny daholobe” ary “fiampangàna ireo manampahefana votendrin'ny fanjakàna ho nanao heloka bevava mifandraika amin'ny asan'izy ireo, kanefa tsy mitondra porofo akory momba ilay heloka” araka ny Andininy faha 316 sy 128 ao amin'ny Lalàna Famaizana, hoy ny mpisolovava azy tamin'ny Amnesty International. Nijanona tany am-ponja izy niandry ny fakàna ambavany azy manaraka, voalahatra ho ny 30 Aprily
Tao Tajerouine, tanàna iray ao amin'ny faritanin'i El-Kef (175 km andrefan'i Tunis), vehivavy iray mpikatroka, Hajer Aouadi, no naiditra am-ponja noho izy niampanga ireo manampahefana ao an-toerana ho nanao kolikoly tamin'ny fitsinjaràna ny “semolina”, tao anaty lahatsary iray nalefany Facebook tamin'ny 12 Aprily. Ao anatin'ilay lahatsary, nolazainy ihany koa fa rehefa niaraka tamin'ny dadatoany izy hitaraina tany amin'ny polisy, dia niharan'ny herisetra sy norahonana hogadraina. Ny ampitson'izay ry zareo no niakatra fitsaràna ary nohelohina ho “naniratsira mpiasam-panjakàna” araka ny Andininy faha125 amin'ny lalàna famaizana, sy “nanaingà tabataba sy korontana teny anivon'ny daholobe” araka ny andininy faha 316 amin'ny lalàna famaizana. Samy mety hizaka famonjàna herintaona miampy fandoavana sazy ara-bola ry zareo.
‘’Efa hatry ny ela ireo manampahefana ao Tonizia no miditra amin'ny fampiasàna lalàna manjavozavo famaizana sy manasazy ny fanehoankevitra ety anaty aterineto, saingy mahatezitra kosa ny fanohizana manao izany ao anatin'ny fotoana isian'ilay valanaretina COVID-19,’’ hoy i Nissaf Slama, mpikambana iray avy amin'ny birao fikarohan'ny Human Rights Watch ao Tunis raha nitafa tamin'ny Global Voices. “Tokony hialàn'ireo manampahefana ny fisamborana sy fanenjehana ireo bilaogera ary ireo olompirenena maneho hevitra am-pilaminana ho amin'ny tombontsoam-bahoaka,” hoy izy nanampy.
Nangatahan'iSlama ireo Toniziana mpanao lalàna mba “hanisy fanitsiana ireo lalàna izay manao ny fitenenana am-pilaminana ho toy ny heloka bevava.”
Raha toa nisy fivoarana mendri-piderana vitan'i Tonizia tamin'ny lafiny fahalalahana maneho hevitra sy ny asa fanaovana gazety hatramin'ny 2011, mbola marobe ireo lalàna miaty faneriterena ny fahalalahana maneho hevitra sy manitsakitsaka ireo fenitra iraisampirenena no mbola tavela any anaty boky any.
Ny andininy faha 86 amin'ny Lalàn'ny Fifandraisandavitra dia milaza fa na iza na iza olona voampanga ho “nanohintohina na nanakorontana ny fiainan'ny hafa amin'ny alàlan'ny tambajotram-pifandraisana natao ho an'ny daholobe” dia mety hiatrika hatramin'ny fidirana roa taona am-ponja. Misy ao anatin'ny Didy Famaizana ny fanamelohana ny fanalàna baraka sy fanelezana votoaty “mety hiteraka fanimbàna ny filaminambahoaka na ny fitondrantena mendrika.”
Fanentanana anaty aterineto ikendrena mpanao gazety
Vao haingana ilay mpanao gazety sy mpamakafaka vaovao, Khalifa Chouchene, no niharan'ny fanentanana iray natao hanamavoana azy tety anaty aterineto, taorian'ny nanakianany ny minisitry ny fahasalamàna, Abdellatif Mekki, .
Tanaty fandaharana anaty onjampeo “Albilad Alyawm,” tao amin'ny Radiom-Pirenena ny 9 Aprily, Chouchene nanakiana ny tsy fisian'ny fanajan'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta ireo fepetra ara-pahasalamana ho fiarovana sy fisorohana ny COVID-19, toy ny fitondràna arotava sy fanajàna elanelana 1 metatra rehefa mitsidika hôpitaly na toby fanokana-monina. “Tokony tsy hidradradradra mitomany ry zareo, satria tsy miraharaha izay ranomaso alatsak'ireo minisitra akory, na izay fihetsehampon'olombelona ny coronavirus, ireo fepetra tena izy sy azo ampiharina eny an-kianja ihany no fantany,” hoy izy. Nandritra ny fiantsoana mpanao gazety natao ny 7 Aprily, nitomany i Mekki raha nangataka ny vahoaka mba hanaja ilay fihibohana faobe ara-pahasalamana ampiharina ao amin'ny firenena hatramin'ny 22 Martsa.
Rehefa namarana ny fanehoankeviny i Chouchene, taty aoriana kely tamin'io fandaharana io ihany, saingy mpanao gazety hafa no nanentana, nitaky fahafahana manao valinkafatra i Mekki. Nokianiny ho ‘’nanebaka’’ azy i Chouchene sy “nanombatombana zavatra tsy ananany fahaizana akory.” “Tsy manampahaizana afaka hanakiana anay ianao’’ hoy i Mekki, raha niresaka an'ilay mpamakafaka.
Ny sasany mpanohana ilay minisitra tamin'ireo tety anaty media sôsialy dia niditra tamin'ny famelezana ilay mpanao gazety sy ny sehatry ny fampahalalambaovao amin'ny ankapobeny tao amin'ny Facebook. Nisy iray nanoratra hoe “tokony potehana any fotsiny ity media mahamenatra ity.’’ Iray hafa nanoratra fa manohana ny “fandoroana ny foiben-toerana [n'ilay media] sy fanamelohana ho faty ireo rehetra izay miasa any amin'ireo media manely fisarahambazana, na mametraka fotsiny ahiahy amin'ny ezaka ataon'ireo matihanin'ny fahasalamana.”
Tao anaty fanambaràna iray nivoaka tamin'ny 10 Aprily, ny Sendikà Nasiônalin'ireo Toniziàna mpanao gazety (SNJT), dia niampanga ilay fanentanana ety anaty tambajotra no sady naneho ny ahiahiny manoloana ny ”fandavan'ny ministera ny kiana ataon'ny media amin'ny filalokalofana ao ambadiky ny hoe miatrika ady amin'ny coronavirus izao ny firenena.’’
Ampahatsiahivin'ny sendikà ho an'ny ministera ny anjara asan'ny mpanao gazety amin'ny fampahatsiarovantena sy ny fanavaozana ny drafitra nasiônaly ho fanoherana ilay viriosy amin'ny fanakianana ny fahabangàna miteraka goragora amin'ireo fepetra noraisina.
‘Tsy vita vaksiny amin'ny kiana’
Tao anaty lahatsoratra iray navoakan'ny Global Voices tamin'ny 14 Aprily, ilay Toniziàna mandray anjara ato, Saoussen Ben Cheikh, dia nanoratra hoe ny ady fandresena lahatra afafin'ireo mpanao politika entina hanoherana ny valanaretina COVID-19 sy ireo media sasantsasany ao Afovoany-Atsinanana ary Afrika Avaratra, “dia niteraka haromotana, tahotra sy fisarahambazana teny anivon'ireo olompirenena.”
Io fitantaràna ny ady io dia niteraka rivo-piainana” mampivondrona ho eo ambany faneva tokana”, izay ivondronan'ireo vahoaka ho eo an-damosin'ireo mpitarika voalaza fa matanjaka sy feno fahavononana.
Ao anatin'io rivo-piainana io, tsy leferina mihitsy ny fanakianana ny governemanta satria lazaina fa miatrika “ady” ny firenena. Vokany, mety hiatrika ezaka fanampenambava azy ireo mpanao gazety sy bilaogera mametraka ahiahy amin'ireo fepetra sy fomba ataon'ny manampahefana hiatrehana ilay coronavirus vaovao, amin'ny filazana azy ireo ho tsy ampy ”fitiavan-tanindrazana” na ”fahaizana manokana” na, toy ny amin'ny tranga manjo an'i Mabrouk sy Aouadi, enjehina ho ”nanaingà tabataba sy korontana teny anivon'ny daholobe.”
‘’Tsy vita vaksiny hiatrika kiana ireo andrimpanjakana sy ireo manampahefana, ary indrindra fa mandritra ny krizy iray,’’ hoy i Slama avy amin'ny Human Rights Watch.